တွယ်တာ: ကာမစာအုပ် ချစ်သူများ အတွက်
ကာမစာအုပ် ချစ်သူများ အတွက်
ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။. ၀၁။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၂။ ဘူးသီးဇာတ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၃။ ကျွန်တော့်ဘဝအမှတ်တရများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၄။ မဟူရာနှလုံးသား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၅။ ရင်ခုန်သံအစစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၆။ လူနာကုတင် ၃၁ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၇။ အရပ်မြင့်မြင့်ချစ်သူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၈။ အကြံကြီးသူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၀၉။ နွေအိမ်မက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀။ ကြောက်တယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၁၁။ နတ်မိကျောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂။ မပိုင်သည့်ပန်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃။ လွမ်းနေမယ်နန်းလေးရယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄။ သင်တန်းများများတက်ကြပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆။ အပြာရင့်ရင့်နေ့စွဲများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇။ နေရာဟောင်းကသွေခွာမပြောင်းပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈။ မောင်လှဇာတ်လမ်း (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉။ မောင်လှဇာတ်လမ်း (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀။ ခြွေလို့ကြွေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၂၁။ ညှာချင်းယှက်နွယ် နမ်းရလွယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂။ ဘဝအလှမမျှပြီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃။ မင်းရဲ့အကြည့်တွေကိုသိနေတယ်လေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄။ မှည့်လေသမျှချိုသမျှကို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅။ မိနစ် ၆၀ အတွင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆။ အချစ်ကိစ္စအလိုရှိသည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇။ မြွေပွေးမ (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈။ မြွေပွေးမ (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉။ လေလှိုင်းထဲမှချစ်ပုံပြင် (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀။ လေလှိုင်းထဲမှချစ်ပုံပြင် (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၃၁။ ဆရာမရယ် တပည့်မရယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂။ နန္ဒာလှိုင်၏ဇာတ်ကြမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃။ ပင့်ကူနီမလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄။ ပထွေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၅။ မင်္ဂလာဦးည၏သတို့သမီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၆။ သမီးရဲ့ဦး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၇။ သဘောင်္သားမယား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၈။ အချစ်မိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၉။ အသစ်ကလေး ၂ ယောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၀။ အမေတခု သားတခု (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၄၁။ ၁၆ နှစ်သမီးရည်းစားထားတော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၂။ ကြက်လဲမော ယာလဲကျက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၃။ သားသားမြတ်နိုးမေမိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၄။ အလွဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၅။ အလွယ်ဆုံးနောက်ပေါက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၆။ အသဲတံခါးလေးဖွင့်ထားပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၇။ အပျော်ချစ်သူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၈။ အမေပြီးတော့သမီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၄၉။ ထောင်ချောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၅၀။ ရောဂါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၅၁။ ခံပွင့်ကိုကုံး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၂။ ချစ်ခြင်းရယ်တူပြိုင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၃။ ချစ်အလိုမတူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၄။ ဂျပန်အလိုတော်ရိငဘ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၅။ နှစ်သက်စရာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၅၆။ ဆွဲအားကောင်းတဲ့အချစ်ကလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၅၇။ သူငယ်ချင်းကောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၈။ အချစ်ကျောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၅၉။ အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၆၀။ ငွေမင်းသား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile).
၆၁။ ကင်ပေစခန်းမှခရဲခန်း (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၂။ ကင်ပေစခန်းမှခရဲခန်း (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၃။ ကညာရိုင်းရိုင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၄။ ကျင်မှီကျင်သီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၅။ ငရဲရဲ့အရသာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၆။ မတင်းတိမ်သောကာမဘုံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၇။ မယားပါသမီးလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၈။ လူမိုက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၆၉။ တေလေမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၀။ ရောဂါကကျွမ်းပေမယ့်ဆေးဆရာကစွမ်းပါတယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၇၁။ ကာရံပျက်ကဗျာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၂။ တအိမ်လုံးပျော်စေဖို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၃။ မမမောင်မောင်မို့မို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၄။ မုဆိုးရှေ့မှောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၅။ မကြောက်ပါနဲ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၆။ လျှာဖျားလေးနဲ့ချစ်တဲ့မောင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၇။ သင်ဇာနဲ့ကျွန်တော် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၈။ အချစ်လုပ်အား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၇၉။ အရမ်းပဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၀။ အောလောက၏စိန်ခေါ်သံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၈၁။ ခုတော့လဲတစိမ်းတွေလိုပါဘဲလား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၂။ ဆွဲငင်အား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၃။ ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၄။ မြတ်မလားလို့ရင်းကြည့်တာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၅။ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၆။ ရမ္မက်ဆန္ဒနဲ့သားကောင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၇။ အဖြည့်ခံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၈။ အရွယ်လွန်အချစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၈၉။ ဂေါ်လီမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၀။ မောင်မောင်မမချစ်မဝ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၉၁။ စွံတဲ့ကိုကို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၂။ ဆရာကြီးစိန် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၃။ ဘုံအချစ်ဝယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၄။ မင်းလောင်းမှန်ရင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၅။ အတ္တစိတ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၆။ အရိုင်းမေပျို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၇။ ချွေးမအလိမ်မ္မာ (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၈။ ချွေးမအလိမ်မ္မာ (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၉၉။ မေမေလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၀။ လေဒီရှုးလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၀၁။ ကာမစိတ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၂။ ကြားကား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၃။ ချစ်ဝေ့လည်လည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၄။ ဂျပိုးမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၅။ ငယ်ငယ်လှလှဆရာမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၆။ ဌက်မသိတော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၇။ တစ်ဖက်ကမ်းကအချစ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၈။ ထွက်တော့မယ်လေကိုင်ထား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၀၉။ ပူစူးမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၀။ သစ်တစ်ပင်ကောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။. ၁၁၁။ ကာရာအိုကေအချစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၂။ ကိုယ်တယောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၃။ ချစ်ခြင်း၏နောက်ကွယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၄။ စခဲ့ပေမယ့်လဲမချစ်ခဲ့ရပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၅။ ပန်းစားဘီလူး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၆။ ပန်းဘုရင်မလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၇။ သူတို့လေးတွေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၈။ အချစ်တစ္ဆေည (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၁၉။ အချစ်နိဗ္ဗန်ဘုံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၀။ ဇော်ဦးကိုယ်တွေ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၂၁။ ကြည့်မရတာချစ်လို့လား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၂။ ကြမ္မာကံပေးအိုရသေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၃။ ခိုင်ရွှေဝါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၄။ ချွတ်တော့ချွတ်မည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၅။ တကယ်ဘဲခက်တဲ့မောင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၆။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၇။ ထိုတစ်ညဝယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၈။ ဖီလင်အိမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၂၉။ မချောသုံးယောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၀။ သူ့ထက်ကဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၃၁။ ကျွန်တော်နဲ့ကတော်တွေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၂။ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကအချစ်များ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၃။ မရည်ရွယ်သောအဖြစ်အပျက်များ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၄။ သရဲကုန်းမှာအစွဲကြုံးမယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၅။ အချစ်ဇာတ်လမ်းရိုးရိုးလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၆။ အချစ်လျော်ကြေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၇။ အချစ်ဟောင်းအချစ်သစ်အချစ်တပါတ်နွမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၈။ ပေးဆပ်ခြင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၃၉။ မေ့လို့မရဘူး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၀။ နှင်းဆီရောင်လွှမ်းသောချစ်ဇာတ်လမ်းများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၄၁။ ကိုယ်စားချစ်သူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၂။ ချစ်ခဲ့မိပါသည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၃။ တဏှာအခံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၄။ မမဇင် (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၅။ မမဇင် (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၆။ မောလ်ဒယ်ပုံ့ပုံ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၇။ မွှေးအချစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၈။ လေလံတင်အချစ်ပွဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၄၉။ သော်တာရောင်ခြည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၀။ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၅၁။ ငတင်းမလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၂။ စွန့်ခဲ့ရကျွန်မဘဝပါရှင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၃။ တဇွတ်ထိုးအချစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၄။ ပန်းဦးပန်သူမသီတာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၅။ မိစူး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၆။ မီးဆန္ဒကိုမေးပါဦး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၇။ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၈။ နေခြည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၅၉။ မောင်မောင်ရဲရဲ့ဘဝ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၀။ ရွှေဖူးစာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၆၁။ ခရီးသွားမှတ်တမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၂။ တစ်ခြုံအကွယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၃။ တီးကွက်တပင်တိုင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၄။ ပြန်ပြောရင်အလွမ်းဖြစ်စေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၅။ ပန်းပန်လျက်ပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၆။ ရင်ခွင်ရိုင်းတို့ကခုန်ချိန် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၇။ ဟဲလို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၈။ အချစ်ဂေဟာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၆၉။ အစကဒီလိုမှန်းမသိလို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၀။ အနမ်းဆိုးများ၏နောက်ကွယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၇၁။ ငတ်မပြေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၂။ နတ်သမီးထောင်ချောက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၃။ ဥမ္မာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၄။ လှထွန်းအကြောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၅။ လမ်းကြုံရင်ဝင်စားသွားပါ (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၆။ လမ်းကြုံရင်ဝင်စားသွားပါ (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၇။ နှလုံးသားဝပ်ရှော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၈။ အချစ်တိုက်ပွဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၇၉။ အိမ်တွင်းဇာတ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၀။ ဖေဖေကြီးညာတယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၈၁။ ချစ်ရပါသောဦး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၂။ ချစ်ရာသက်ပန် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၃။ ဓာတ်လိုက်တတ်သည်သတိထား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၄။ နားနားနေနေအသာလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၅။ မချစ်တတ်သူများမဖတ်ရ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၆။ မမကိုအလိုမလိုက်နဲ့မောင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၇။ မမသွယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၈။ မိုးမမြင်လေမမြင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၈၉။ မနူးမနပ်ကလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၀။ မောင်မောင်ကိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၁၉၁။ ချစ်တာအပြစ်လား (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၂။ ချစ်တာအပြစ်လား (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၃။ ချစ်တာအပြစ်လား (၃) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၄။ ချစ်ပေါက်ကွဲသံစဉ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၅။ အခါလွန်မိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၆။ အချစ်မှော်ဆရာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၇။ အပျိုစင်လုံမေချော (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၈။ အဖြူရောင်နှလုံးသား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၁၉၉။ အရက်သမားဆိုသိပ်မုန်းတယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၀။ အရိုင်းနှင့်အယဉ် (စ-ဆုံး) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။. ၂၀၁။ အချစ် (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၂။ အချစ် (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၃။ အချစ်ကြိမ်လုံး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၄။ အချစ်မာယာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၅။ အချစ်ရှာဖွေသူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၆။ အချစ်အတွက်ဆက်လက်ရှင်သန်မယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၇။ အငြိမ့်မင်းသမီးများရည်းစားထားတော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၈။ အဓမ္မကာမ၏မဟာရသ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၀၉။ အမုန်းငယ်ရဲ့မုန်းပင်လယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၀။ အစေခံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၁၁။ စွဲလမ်းပါစေမက်ပါစေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၂။ ဖိတ်ခေါ်ရင်ကွယ်လိုက်မယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၃။ မိုးသက်လေညှင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၄။ မိအေးနှစ်ခါနာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၅။ ရာဇဝင်ကြွေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၆။ သည်းခြေပျက်မလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၇။ အတာရေနဲ့ဆေးပေါ့မယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၈။ အသည်းတွေလဲကျွမ်းပြီငယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၁၉။ လောကဓာတ်နှင့်ကိလေသာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၀။ ဦးကြာဖူးရဲ့နေ့ပြန်တိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၂၁။ ကျွန်တော်နှင့်ကျောင်းတော်ကြီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၂။ ကျွန်တော်နဲ့သဲသဲဝေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၃။ ဒိုင်ယာရီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၄။ ပထမဆုံးအချစ်ကိုစားသုံးခြင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၅။ ဗွီဒီယိုထဲကအချစ်မျိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၆။ မဗေဒါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၇။ ရုံးတွင်းဇာတ်လမ်း (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၈။ ရုံးတွင်းဇာတ်လမ်း (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၂၉။ သီရိပစ္စယာသား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၀။ ဖောက်ပြန်လေသည့်အချစ်များ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၃၁။ ချစ်ကန္တာရလမ်းဝယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၂။ ချစ်ခြင်းဖွဲ့သံစဉ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၃။ ပင်လယ်ပြာပြာအချစ်ပြာပြာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၄။ ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေတော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၅။ မမဖြူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၆။ ဝတ်ရုံနက်နှင့်လူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၇။ သံယောဇဉ်မလေးကြောင့် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၈။ အပြာရောင်သစ္စာစကား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၃၉။ အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၀။ အလှမပြည့်ခင်ကြွေတဲ့ပန်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၄၁။ ကိုကိုမောင်တော်တော်ဆိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၂။ ခင်ထားလင်မများပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၃။ ချစ်နည်းလမ်းပွင့် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၄။ ဒန်ပေါက်နဲ့ကြေးအိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၅။ ဒီပိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၆။ ဓားသွားပေါ်ကနှင်းရည်စက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၇။ ပန်းခရေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၈။ မက်မပြေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၄၉။ မရှက်ပါနဲ့ကလေးရယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၀။ သူဌေးကတော်ကြီးနဲ့ကိုလူပျို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၅၁။ ဂီးတစ်ကောင်၏ဖွင့်ဟချက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၂။ စိတ်တူကိုယ်တူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၃။ တဲ့ဝင်သွားသောခွင်တစ်ခွင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၄။ ပိုက်ဆံချေးခြင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၅။ မချစ်ရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၆။ မိန်းမလှကျွန်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၇။ မာနမင်းသမီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၈။ အိုးမိုင်ဒါလင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၅၉။ စောမြသီတာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၀။ လောကစည်းစိမ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၆၁။ ခင်မမ၏ကိုယ်တွေ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၂။ ထိန်းသော်လည်းယိမ်းခဲ့ရပြီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၃။ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၄။ မှတ်မိပါသေးသည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၅။ မှန်ရာကိုထွက်ဆိုပါမည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၆။ ရာဇဝင်မသိရင်ကညာခင်တိုင်းဟာအပျိုစင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၇။ သိဂီ င်္ဇော် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၈။ သူနာပြုဆရာမလေး (၁) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၆၉။ သူနာပြုဆရာမလေး (၂) (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၀။ အိမ်မက်ချိုချို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၇၁။ ကျူရှင်စာရေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၂။ ခပ်ပြင်းပြင်းရင်ခုန်သံပိုင်ရှင်များ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၃။ ဂျပန်ရောက်ရင်ကျေနပ်ပါပြီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၄။ စမော်လ်တို့ရွာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၅။ ပျံလွှားမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၆။ မာရ်နတ်၏မယားပါသမီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၇။ လူယုတ်မာဦးလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၈။ သားကောင်းမိခင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၇၉။ အဲဒါကြီးကိုချစ်တာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၀။ အပိုဆု (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၈၁။ ကြပ်နေရင် အပျိုပဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၂။ ကာမသွေးဆိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၃။ ချစ်ကိုကြီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၄။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၅။ ဓာတ်လှေကားထဲကဇာတ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၆။ နာရီမဲ့စုတ်ချက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၇။ ဘဲဘွတ်သည်မထား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၈။ အပျိုပေါက်မလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၈၉။ ကျောင်းသူဘဝကဲသမျှ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၀။ တော်တော်ကဲတဲ့မောလ်ဒယ်ဂဲလ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၂၉၁။ မမကိုချစ်လို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၂။ မာယာများနဲ့အချစ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၃။ အချစ်တန်ဖိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၄။ အတ္တမျဉ်းပြိုင်များ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၅။ အိပ်မက်ထဲကစင်္ကာပူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၆။ အရသာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၇။ ကျေးဇူးရှင် bus ကားကြီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၈။ ဒေါက်တာတော်တော်ဆိုး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၂၉၉။ မေဧကရီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၀။ မောတော့မောတာပေါ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၃၀၁။ ကာမပေါ်လစီ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၂။ ခံစားကြည့်ပါ...မမူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၃။ စိတ်ကစားတဲ့မမ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၄။ သူမရေးတဲ့စာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile) ၃၀၅။ သမီးဘဝဇာတ်ကြောင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.
၃၀၆။ ကျွန်တော့်ပီယာနိုဆရာမလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၇။ ချစ်တယ်ဆိုတာယုံပြီလား (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၈။ ချစ်ပါရစေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၀၉။ ငတ်မပြေတဲ့ဆားငံရည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၀။ စိမ့် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၁။ ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ညတာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၂။ ဆရာမလေးကိုပညာပေးခြင်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၃။ ထည့်မှာသာထည့်စမ်းပါ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၄။ ပထမဆုံးလိုးဖူးသူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၅။ ဖိနပ်ကလေးတစ်ရံ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၆။ ဘကြီးထောင်ရဲ့ချစ်ဒုက္ခ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၇။ မင်းကိုလာအောင်လုပ်ပေးမယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၈။ ပြန်တွေးမိတိုင်း....မျက်ရည်ဝိုင်း...အတိုင်းအဆမရှိလွမ်းရသည်(Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၁၉။ လက်ဦးဆရာ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၀။ ဟိုပင်ဒီပင်ကူးပါလို့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၁။ အချစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိမ်ကလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၂။ အသက်နှင့်ရမ္မက် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၃။ အေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)......................................................................................................ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
၃၂၄။ ခွင့်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့(Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၅။ နတ်သမီးပေးတဲ့ ချစ်လက်ဆောင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၆။ မအေးရဲ့မောင်လေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၇။ လမ်းခွဲ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၈။ လှလှလေးစက်ချုပ်ဆိုင် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၂၉။ အင်းယားလမ်းက ချစ်ဇာတ်လမ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၀။ နေရာင်အဖွင့်နဲ့ ပျော်ကျသောနှင်းမှုံတစ်ပွင့် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၁။ ခြွေလှဲ့တော့..........တံချူ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၂။ မျှော်တလင့်လင့် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၃။ အမုန်းတရား၏အဆုံးသတ်မျဉ်း (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၄။ ရှေ့ဆက်တိုးလို့လဲ......ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ (Ziddu) (Mediafire) (Iifle)...........................................................................................................ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
၃၃၅။ ဆံပင်ရှည်မင်းသမီးလေး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၆။ ချစ်ဧည့်သည် ချစ်ဧည့်သည်ပျို (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၇။ မမလှလှ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။.၃၃၈။ တော်ပါသေးရဲ့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၃၉။ အချစ်ဆေးရုံကြီး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)..၃၄၀။ အချစ်ကိုသိချိန် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၁။ သီရိလှိုင်နဲ့ဦးထွန်းကြည် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၂။ ဗို့အား ၁၅၀၀ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၃။ ကျွန်မမှာချစ်သူရှိတယ် (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၄။ ရှေ့ နေမလေးသီရိနှင့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အမှု (အပိုင်း ၁) (Ziddu)(Mediafire) (Ifile) ၃၄၅။ မယားတောသူ (Ziddu) (Mediafire) [(Ifile).
၃၄၆။ ဆင်းရဲတွင်းက နက်လေတော့ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၃၄၇။ သံယောဇဉ်ရှိခဲ့ဖူးသော (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၈။ ဖိုး ၀မ်း စီ ဖိုး တူး (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)၃၄၉။ ကူညီပါရစေ (Ziddu) (Mediafire) (Ifile)
၃၅၀။ သမုဒ္ဒရာဝင်္ကဘာအကျဉ်းသားများ (Mediafire) (Ifile)၃၅၁။ ဆံပင်ညိုညိုလေး (Mediafire) (Ifile)၃၅၂။ ချစ်သူပြန်စာ (Mediafire) (Ifile)
၃၅၃။ သက်ထားအလိုကျ (Mediafire) (Ifile)
၃၅၄။ ကိုကိုနှင့်ကျွန်မ၏ဖြစ်ရပ်များ (Mediafire) (Ifile)၃၅၅။ ရက်ကွက်ထဲမှာ (Mediafire) (Ifile)၃၅၆။ အတုမြင်အတပ်သင် (Mediafire) (Ifile)၃၅၇။ မီးကြောင့်သင်မလောင်ပါစေနှင့် (Mediafire) (Ifile)၃၅၉။ အဌားလင် (Mediafire) (Ifile)၃၆၀။ ဘိုတဲမှာအကိုဆွဲမယ် (Mediafire) (Ifile)၃၆၁။ ကာမပန်းတိုင် (Mediafire) (Ifile)၃၆၂။ ဂျီနာ (Mediafire) (Ifile)၃၆၃။ ပထွေး (Mediafire) (Ifile)၃၆၄။ အပျိုကြီးဆရာမရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှု (Mediafire) (Ifile)
၃၆၅။ မမလှလှခပ်ရွရွ(Mediafire)(Ifile) ၃၆၆။ကျမရဲ့ ဖြစ်အင်(Mediafire)(Ifile)
ဖိုး ၀မ်း စီ ဖိုး တူး (အပိုင်း-၂) http://ifile.it/pneyjms/65162709-4oneC4twopart-2.pdf http://www.mediafire.com/?rpu8ta4esvi0q0g ရင်ခုန်မှူးရစ်မင်္ဂလာဦးhttp://www.mirrorcreator.com/files/MCXLKLVZ/ http://www.mediafire.com/?32vuqdg4l823vdy
ကုန်သည်ပွဲစားသဘောင်္သား အပိုင်း ၁ (mirrorcreator) (Mediafire) (Ifile) ကုန်သည်ပွဲစားသဘောင်္သား အပိုင်း ၂ (mirrorcreator) (Mediafire) (Ifile)
သာဂိအစအဆုံး zshare.net ifile.it mediafire.com
ဂျင်ဂလိရဲ့ ဟိုပင်ဒီပင်ကူးပါလို့ MediaFire Ifile
ပြည်တန်တဲ့ယောကျာင်္ (Mediafire) (Ifile)
စာအုပ်အမည်............. (ရုပ်ပြဇာတ်လမ်း-ဘာသာပြန်)-ပဉ္စလက်မာယာရှင်-( ၁ )( ၂ ).rar ပေါင်းချုပ်Code: [Select]http://www.mediafire.com/?ecfl5twybl93jzc
-ကျောင်းသူလေးများရဲ့ဂလဲ့စား-( အပိုင်း ၁-၂-၃-၄-၅ ).rar ပေါင်းချုပ်12.39MBCode: [Select]http://www.mediafire.com/?znpi7jbn31f4x1n
ကာမစာအုပ် ချစ်သူများ အတွက် ( ၂ )
ကော့သောင်း J&P Restaunt Vocal Girl
မြန်မာ Cam Girl